kufukidzwa Railway Labor Union Agreement muna Turkey Chinese 7 18 zviuru-kiromita mukuru-nokukurumidza njanji mutsetse zvichabviswa kuvakwa | RayHaber | raillynews
mushaTHE WORLDASIA86 Chinakufukidzwa Railway Labor Union Agreement, Chinese vachavaka 7 18 zviuru-kiromita mukuru-nokukurumidza njanji mutsetse muTurkey
kufukidzwa Railway Labor Union Agreement, Chinese vachavaka 7 18 zviuru-kiromita mukuru-nokukurumidza njanji mutsetse muTurkey
19 / 06 / 2012 86 China, ASIA, THE WORLD, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya, TURKEY
Hurumende inotarisira kuvaka 2023 chikwi 9 km yakakwirira motokari yepamutambo kusvika ku978. Saka, pengarava mambure achapiwa kaviri makore 12, uye Turkey achava mutungamiriri mukuru-nokukurumidza nezvitima mu Europe.
45-25 bhiriyoni chikamu chemazana emapurogiramu nebhadharo ye30 mabhiriyoni emadhora ichagoverwa kubva kuChina. Pasi pe "Railway Cooperation Agreement", maChinese achavaka 7 makiromita 18 makiromita ekufambisa. Zisara 2 zviuru 924 makilomita zvichaitwa nehutano uye chikwereti chekunze.
Mashamba ekumhanya-famba achapfuura nemaguta mana muCentral Anatolia. Ankara-Konya high-speed train line yaiva imwe yevatungamiri, uye kunyange kufamba kwakatanga.
Kutevera izvi, mabasa ekuvaka anoenderera mberi pa 468 kilometer Ankara-Sivas line. Zvisinei, motokari yakakura-inotama ichasiya Yozgat Yozgat 30 makilomita kusvika mukati meguta, ipapo ichaenderera kuSivas. Zvikwata zvepamusoro-kubva kuAnkara kana Istanbul zvichaenda kune Kayseri neJerköy.
Nokudaro, motokari huru-Ankara-Yozgat 1,5 maawa, pakati peAnkara-Kayseri 2 maawa 30 maminitsi ichave.
Apo magwadhi anofara uye misha yekugadzirisa inopedzwa, chikamu chemusika mukutakura kwevatakari inotarisirwa kusvika 2023 mu15 uye mu 20 mune kutakura kwekutakura.
Bursa-Yenişehir YHT ine 2023 kuti ivake zviuru gumi zvemakiromita emhando yepamusoro yechitima ...
Mukati mekuyera kweA Ankara - Istanbul High Speed ​​Railway Project, 400 arasında
Turkmenistan kuvaka tafura yepamutambo yakadzika
Atlas Iron uye QR ichavaka gwara rezvitima paNational Pilabara
China kuvaka Bhizinesi-Moscow mumigwagwa ne242 mabhiriyoni emari
Masteel inoratidza zvirongwa zvekushandira pamwe nesangano rekuchengetwa kwechitima cheShanghai
Kushandira pamwe Sangano reMotokari yeMagetsi kuMalatya
Kubvumirana Kubvumirana kweS Smart City Solutions muDiyarbakır
Turkey achavakira njanji muEthiopia
Russia kuvaka sarai muAfrica
11 582 zviuru makiromita muTurkey Mberi Basa riri Railway Line
Izmir-Antalya high-speed train line yaidaidzwa neChina
Zvinhu zvinotapukira mumatokari zvinotsvaga nehukuru x-ray
The 'Network Vachitsigirwa Talent' chirongwa yakataurwa ASELSAN akaratidza katsi rayo kubva NATO raMwari EURASIAN STAR'19 boora. EURASIAN STAR (EAST) 2019 Exercise, 3rd Corps Command, muIstanbul, NATO Command uye [More ...]
TCDD inovaka rusvingo rwakananga kuGezeze-Arifiye YHT nzira
High-Speed ​​Train Project muTurkey
International Railway Association High Speed ​​Chitima 2012 zvakanaka 10 - 13 Chikunguru,…
3. bhiriji, gasi guru uye motokari
Nzira 49 bin 681 yakashandisa 1 mapirundi mapaundi mumugwagwa